Home » Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala » Thailand na UK: Oh otu COVID-19 si gbanwee ala
Nwere ike 8, 2021
Thailand na UK - Ebe obibi David Barrett na Cornwall
dere David Barrett
Nye David Barrett, mgbe ọ nọrọ afọ 32 na Thailand, onye bụbu onye isi njem njem na nso nso a laghachiri UK iji guzobe ụlọ. Nke a bụ akụkọ ya…
Banye na UK na mbido ọrịa na-efe efe na Thailand dị ka abalị na ehihie.
Ndị mmadụ na-eku ume mgbe m ji ihe nkpuchi na-abanye n'ụlọ akụ, ọ bụghị n'ihi na ha chere na m chọrọ ịpụnara ha ihe, kama n'ihi na ha chere na m na-arịa "nje virus" ndị China.
Ekwesịrị m ịnọ ka m kwesịrị ịkwado ya ebe a?
Otu afọ na mgbanwe nke uba. Otu afọ gara aga, ọ bụ naanị na March 18, 2020, m gbagara UK na njem iji lelee akụ na ụba anya na Cornwall. Anọ m na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ England ruo ụbọchị atọ tupu njem ụgbọ oloko ahụ a na-ezube iji mee njem na Cornwall.
Ụbọchị abụọ na UK, ya na ndị Brits na-agbaso mgba ụbọchị mbụ nke ọrịa a, agara m ileta ụlọ akụ m maka oge. Ka m na-abanye nkpuchi na bank, m nwere ike ịnụ ka ndị ahịa na ndị ọrụ na-asọ ka ha na-alaghachi ma na-ele m anya n'ụjọ ka m na-ekpuchi ihu. Otu onye odeakwụkwọ na-eto eto gbara ọsọ bịakwute m kpọbatara m n’otu obere ụlọ nzukọ. Onye isi ụlọ akụ ahụ wee bata n'ụjọ wee hụ m ka m na-ekpuchi ihu. “Are na-arịa ọrịa?” ọ jụrụ. "Got nwere nje ndị China?" Azaghachiri m n'ụzọ siri ike na m na-ekpuchi ihe mkpuchi maka nchebe m, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ibute ọrịa ma buru nje ahụ. N'oge ahụ onye ode akwụkwọ na-eto eto batara n'ime ụlọ ahụ, na-efegharị n'elu onye njikwa ụlọ akụ ahụ wee malite ịgba mmiri ọma nke ọgwụ na-egbu nje. Ihe ụmụ irighiri mmiri ahụ eruteghị m kama ha dakwasịrị na laptọọpụ onye njikwa na ntutu isi. N'ịbụ onye iwe were, manịja ahụ baara onye ọrụ ụlọ ọrụ ahụ mba, sị, “I mewo ka keyboard m dee!” Tupu odeakwụkwọ ahụ enwee ohere igosipụta na ọ na-eme ka ọ ghara ịdị na-eche nche, onye njikwa ahụ tụụrụ m aka n'ọnụ ụzọ ma kpochapụ kọmputa ya.